Heyadda ICG oo warbixin culus ka qortay doorashadii dhowaan ka dhacday Baydhabo | Warsiman
Heyadda ICG oo warbixin culus ka qortay doorashadii dhowaan ka dhacday Baydhabo
Hay’adda caalamiga ee ah ka-hortagga Xasaradaha ICG ayaa warbixin ka qortay doorashadii dhowaan ka dhacday magaalada Baydhabo.
Warbixintan oo cinwaan looga dhigay (K/Galbeed: Madaxweyne la caleemo-saaray iyo Xiisad holacday) ayaa lagu sheegay in 19kii December ay xildhibaanada Maamulka Koonfur Galbeed u doorteen C/casiis Max’ed Laftagareen Madaxweyne ka dib codeyn khilaaf badan uu hareeyay oo sabab u noqon karta amni darro hor leh.
Heyadda ICG waxay aaminsan tahay in Laftagareen uusan doorashadan ku guuleysan lahayn haddii uusan garab ka heli lahayn dowlada federaalka oo xabsiga dhigtay musharaxii la tartami lahaa Mukhtaar Roobow oo ka mid ahaa musharaxiinta loo saadaalinayey doorashadan iney ku guuleystaan.
“Inkastoo Roobow iyo Lafta gareen ay ka soo wadajeedaan Beesha Raxanweyn, haddana Roobow ayaa ka dhashay beel weyn oo saameyn adag leh.”ayaa lagu yiri warbixintan.
Warbixinta ayaa lagu xusay in xariga Mukhtaar Roobow uu sababi karo in hogaamiyaasha Al-shabaab aysan ku soo dhiiranin inay dagaalka joojiyaan kana soo baxaan kooxdaas, maadaama ay xabsi ku dambeynayaan.
“Mukhtaar Roobow oo qiyaastii 50 jir ah waxa uu ka soo jeedaa gobolka Bakool isagoo ka dhashay beesha Leysaan waxa uu ka mid yahay Islaamiyiinta caanka ah ee Sharciga Islaamka ku soo bartay dalka Sudan, waana Khabiir ka soo qeyb galay Dagaalki Afganistan ee looga soo horjeeday Ciidankii Midowgii Soofiyeeti, wuxuuna markii dambe waqti kooban maamulayey Hay’ad Samafal Islaami ah oo Sacuudiga laga lahaa.”ayaa lagu yiri warbixinta oo sidoo kale lagu xusay halgankii uu soo maray iyo diidmadii uu ka muujiyey amaradii uu siiyay hogaamiyihii hore ee Al-Shabaab Godane ee ahaa markii la qabsanayay magaalada Baydhabo inuu laayo dhamaan siyaasiyiinta la qabto, iyadoo Roobow uu siiyey waddo ay ku baxsadaan siyaasiyiin ay isku beel yihiin oo Baydhabo lagu qabtay.
ICG ayaa sheegtay in Shariif Xasan uu isku casilay markii uu dareemay culeys badan, waxaana la rumeysnaa inuu Roobow ku guuleysanayo doorashada, balse dowlada oo wadataty musharax kale ayaa geed dheer iyo mid gaaban u kortay in roobow laga reebo doorashada.
ICG ayaa fursad qaali ah oo luntay ku sifeysay doorashada Mukhtaar Roobow iyadoo aaminsan inuu gacan ka geysan karay in saraakiisha ku jira Al shabaab uu ka dhaadhiciyo inay hubka dhigaan oo ay ku soo biiraan dowlada.
Taas bedelkeed ayey ICG sheegtay inuu furmay albaab kale oo ah in dadka taageersan Roobow ay dib keymaha u galaan oo ay halgankoodii halkiisa ka sii wadaan.
“Soomaaliya waxaa ka dhex bilaaban doona tartan u dhexeeya Islaamiyiin iyo Cilmaaniyiin marka la gaaro doorashada 2020, kaasoo ay qeyb ka noqonaan dowlada federalka iyo urur diimeedyo ay ka mid yihiin Alla Shiikh, Dam al-Jaddid Al-I’tisam iyo kuwo kale” ayaa lagu soo gebagabeeyey warbixinta ICG.